मीनराज कँडेल | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता मीनराज कँडेल
नेपाल बचत तथा ऋण
केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लि. (नेफस्कुन)
”बचत-ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा गर्दैछौं”
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लि (नेफस्कुन)को १९ औं साधारणसभाले मीनराज कँडेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अवस्था र नेफस्कुनको भावी कार्यक्रमका विषयमा आर्थिक अभियानले कँडेलसँग गरेको वार्ताको सारः
नेफस्कुनमा दोस्रो कार्यकालका निम्ति तपाईं फेरि अध्यक्ष चुनिनुभएको छ । नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
अघिल्लै कार्यकालमा हामीले नेफस्कुनको तीनवर्षको रणनीति तयार गरेका थियौं । उन्नाइसौं साधारणसभाले पारित गरेका प्रस्तावलाई हामी त्यही रणनीतिअन्तर्गत लागू गर्दै जानेछौं । नेफस्कुन एशियाली ऋण महासङ्घ, विश्व ऋण परिषद् र अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा समेत आबद्ध रहेको छ । हामी अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले प्रतिपादन गरेको सात सिद्धान्त र विश्व ऋण परिषद्ले प्रतिपादन गरेको नौ सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँछौं । यस अर्थमा हामी सिङ्गो नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउन क्रियाशील रहनेछौं । नेफस्कुन केन्द्रीय सङ्घ भएको नाताले सदस्य संस्थाहरूको संस्थागत विकासका निम्ति हाम्रो विशेष पहल हुनेछ । नेफस्कुनलाई स्थापना कालदेखि नै एशियाली ऋण महासङ्घले विविध प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । ती प्रविधिहरूलाई अब नेफस्कुनका सबै सदस्य संस्थासम्म पुर्‍याएर सबल र सक्षम बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ । ऋण सङ्घका नौ सिद्धान्तअनुरूप ‘पर्ल्स मनिटरिङ सिष्टम’लाई सशक्त रूपले अगाडि बढाइनेछ । हाम्रो परिकल्पना पनि ‘नेपालमा दिगो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू’ भन्ने छ । त्यसका निम्ति सहकारी आन्दोलनमा देखा परेका समस्या समाधानका निम्ति निरन्तर सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नेछौं ।
बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको मूल समस्याचाहिँ के हो ?
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका निम्ति नेपालमा छुट्टै ऐन नहुनु नै अहिलेको मूल समस्या हो । अन्तरराष्ट्रियस्तरमा जुनजुन देशमा ‘क्रेडिट युनियन’हरू शक्तिशाली र सरकारसँग समन्वय गरेर हिँडेका छन्, त्यहाँ छुट्टै ‘क्रेडिट युनियन कानून’ बनाइएका छन् । दक्षिण कोरिया, हङ्कङ, ताइवान, क्यानाडालगायतका मुलुकमा छुट्टै क्रेडिट युनियन कानून छन् । क्रेडिट युनियनसम्बन्धी छुट्टै कानून भएका देशहरूमा बचत तथा ऋण सहकारी अनियान अत्यन्तै व्यवस्थित भएर गएको छ । यसैका निम्ति हामीले पनि ‘क्यानेडियन कोअपरेटिभ एशोसिएशन’को सहयोगमा परामर्शदाता नियुक्त गरेर छुट्टै ऐन बनाउनका निम्ति मस्यौदा तयार गरिरहेका छौँ । यसका निम्ति हामीले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय गोष्ठी गरेर सुझाव सङ्कलन गरी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने चरणमा पुर्‍याएका छौँ । निकट भविष्यमा हामी त्यो मस्यौदालाई सरकारसमक्ष बुझाउनेछौँ । बचत तथा ऋण सहकारी एने पारित गराउन सकियो भने वित्तीय कारोबार गर्ने मुलुकका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई एउटा प्रणालीमा हिँडाएर गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । सहकारी संस्थाहरूमाथि सरकारले लिइरहेको कर अर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।
ग्रामीणक्षेत्रका सहकारी संस्थाहरू त अहिले पनि करमुक्त नै छन् नि ?
हो, अहिले ग्रामीणक्षेत्रका सहकारी करमुक्त छन् । तर, त्यसका निम्ति हामीले सरकारसँग निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । सहकारी ऐन, २०४८ मा कुनै पनि सहकारीलाई कर नलाग्ने प्रावधान थियो । तर, २०५७ सालको बजेट वक्तव्यमार्फ सबै सहकारीलाई ३० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था भयो । फेरि २०५८ सालको आर्थिक ऐनले नगरपालिकाबाहेक ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीलाई करमुक्त बनायो । २०६१ सालमा हाम्रै पहलमा पूर्वाधार नपुगेका ३० नगरपालिकामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारीलाई पूर्ण कर छूट दिने व्यवस्था गरियो । बाँकी २८ ओटा नगरपालिकामा पनि ३० बाट २८ प्रतिशतमा झार्ने काम भएको थियो । तर, लोकतान्त्रिक सरकार बनेपछि सबै नगरपालिका मात्रै होइन, तीसँग जोडिएका गाविसमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेत कर लगाइयो । अहिले फेरि ५३ नगरसँग जोडिएका गाविसका सहकारीलाई चाहिँ करमुक्त गरिएको छ । तर, महानगर, उपमहानगरसँग जोडिएका गाविसमा रहेका सहकारीलाई अहिले पनि २० प्रतिशत कर लगाइएको छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले कुनै पनि किसिमका कर लगाइनुहुन्न । त्यसका निम्ति नेफस्कुनको पहिलो बैठकबाट मुलुकको सहकारीक्षेत्र करमुक्त हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेका छौं । सहकारी क्षेत्रलाई करमुक्त बनाउन सरकारलाई नेफस्कुनले अनुरोध गर्नेछ । हाम्रो अनुरोधप्रति सुनुवाइ भएन भने हामी चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौं ।
सहकारीमार्फत लाखौं-करोडौं आर्जन गर्नेले राज्यसँग कर छूटको माग राख्नु न्यायसङ्गत हुन्छ त ?
सहकारीमा सबै मिलेर सबैका लागि काम गरिन्छ । यो सामूहिक र समुदायको काम हो । व्यक्तिव्यक्तिसँग रहेको थोरैथोरै पूँजी सङ्कलन गरेर सहकारीमार्फत सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतिका निम्ति सहकार्य गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि कर लगाउनुहुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय परम्परा र अनुभवलाई पनि हेर्ने हो भने पनि धेरै मुलुकले सहकारीमा कर लगाएका छैनन् । जहाँ लगाइएको छ, त्यहाँ पनि असाध्यै कम-नाम मात्रको कर लगाइएको उदाहरण छ । समग्रमा भन्ने हो भने मुलुकमा रोजगारी सृजना गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने राज्यको काममा सहकारीले ठूलो मद्दत पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यसको व्याख्या अझै विस्तृत र गहिरिएर गर्न पनि सकिन्छ ।
तपाईं सहकारी क्षेत्रलाई करमुक्त गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । तर, सहकारी संस्थाहरूले मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत अनेक शुल्कका नाममा सदस्यहरूसँग रकम
असुल्ने र गैरसदस्यबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने गरेका छन् नि ?
सहकारी संस्थाले कुनै पनि प्रकारका सेवाशुल्क लिनुहुदैन र पाइदैन । यस सम्बन्धमा हामीले धेरैपटक सहकारी विभागसँग नियमन निकायबाट कडाइका साथ अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ भनेका छौँ । नेफस्कुनका धेरै सदस्य संस्थाहरूले सहकारीको मूल्यमान्यताविपरीत सेवाशुल्क लिँदैनन् । सहकारी विभागको मापदण्डअनुसार बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरमा पनि अधिकतम ६ प्रतिशतभन्दा फरक हुनु हुदैन भनेका छौँ । जुन जुन संस्थाले अनधिकृत रूपमा ठूलो परिमाणमा सेवाशुल्क लिइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यो रोक्ने दायित्व राज्यको हो । हामी सहकारी अभियानका तर्फाट पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । सहकारी संस्थाले आफ्नै सदस्यहरूलाई अनेककिसिमका सेवाशुल्कका नाममा रकम असुल्नु ठगी हो । यसलाई सम्पूर्ण रूपले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जसले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्छ, त्यस्ता संस्थालाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । यसैका लागि पनि हामीले छुट्टै ऐनको माग गरेका हौँ । हामीले मस्यौदा गरिरहेको छुट्टै सहकारी ऐनमा पर्ल्स (पीईएआरएलएस) अनुगमन प्रणालीलाई अनिवार्य गरेका छौँ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई बचत-ऋण सहकारीहरूले पालना गरेका छन् त ?
यो ऐनको पालना भएको छ र गर्नु पनि पर्छ । शुरूशुरूमा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले हामीलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने हो कि भन्ने त्रास र शङ्का पनि भयो । राज्यले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम जम्मा भएको सूचना दिएर कालो धनलाई सेतो बनाउन र शङ्कास्पद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सहकारीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै संस्थाहरू एकमत छन् । त्यहीअनुरूप कार्य पनि भएको छ ।
सहकारीबीच मर्जरको कुरा पनि उठेको थियो । त्यो के भइरहेको छ ?
अहिले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या २० हजार नाघिसक्यो । त्यसमा बचत-ऋणका सहकारी संस्थाहरू सङ्ख्या ९ हजार पुगेको छ । हामी एउटै कार्यक्षेत्र र प्रकृतिका संस्थाहरूलाई गाभेर एउटा बलियो संस्था बनाउन चाहन्छौं । त्यस काममा हामी लागिरहेका छौं । भरखरै मात्रै लमजुङमा दुइ ओटा संस्था मर्ज भएर एउटा बनेको छ । त्यसअघि त्यहीँ पाँच ओटा संस्था गाभिएर दुइ ओटा पनि बनेका थिए । दोलखामा जनमुखी र दिदीबहिनी सहकारी संस्था गाभिएका छन् । मोरङमा नवपालुवा र रमाइलो बचत तथा ऋण सहकारीको एकीकरण भएको छ । पाल्पामा पनि कतिपय संस्थाहरू एकीकरण भएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा क्यानडा, दक्षिण कोरिया र जापानमा यस्ता सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणपछि अत्यन्त शक्तिशाली भएको हामीले देखेका छौं । हामी पनि त्यस्तो एकीकरणको कार्यलाई अभियानकै रूपमा बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप लागेका छौं ।
जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि बचत ऋण सहकारीहरूले सिद्धान्तविपरीत शेयर सदस्यबाहेकका व्यक्तिबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न छोडेका छैनन् ?
बचत-ऋण सहकारीमा अहिले देखिएको मूल समस्या यही हो । त्यस्ता संस्थालाई त्यसो नगर्न हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ । सहकारी विभागले पनि त्यस्ता संस्थाहरूलाई ऐन नियमअनुरूप चल्न निर्देशन दिइरहेकै छ । सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुरूप नहिँड्ने संस्थाहरू अब पनि सुध्रिएनन् भने विभागले कानूनी कारबाही गर्ने भनेको छ । हामी कानूनी कारबाही नै गर्नुपर्ने आवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छौँ । सहकारी अभियान भनेको स्वनियमन र स्वनियन्त्रित कार्य पनि हो । नेफस्कुनको अघिल्लो वर्षको साधारणसभाले विनियममा परिवर्तन गरी आफूसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण र लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो संशोधित विनियम सहकारी विभागबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ । त्यसबाट अब हामी हाम्रा सदस्यहरूलाई नियममा हिडाउन सक्ने भएका छौँ । तर, जो नेफस्कुनको सदस्य बनेको छैन, तिनलाई चाहि हामीले स्वनियमन हुदै सहकारी मूल्य र आदर्श अनुरूप हिडँ भनेर आह्वान गर्ने हो ।
नेफस्कुनको सदस्य संस्था कति छ ?
केन्द्रीय सङ्घसँग सोझै आबद्ध हुने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ८ सय २६ छ । हामीसँग आबद्ध ३७ जिल्ला सङ्घसँग आबद्ध संस्थाहरू १ हजार छन् । त्यसो त विगत ३ वर्षदेखि मात्र बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढेको हो । २०६४ सालअघिसम्म जम्मा २ हजार ३ सय ५० मात्र यस्ता संस्थाहरू थिए । अहिले हामीले नेपालका सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई केन्द्रीय र जिल्ला सङ्घमा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छौँ ।
नेफस्कुन आफैले सफ्टवेयर र स्टेशनरी व्यवसाय पनि गरिरहेको छ । त्यो कस्तो चलेको छ ?
अहिलेसम्म १ सय संस्थाले सफ्टवेयर किनेका र ५१ ले जडान गरिसकेका छन् । यो सफ्टवेयर आफ्ना सदस्यलाई रू. ५० हजार, सदस्य नभएका बचत तथा ऋण सहकारीलाई रू. ६० हजार र अन्यलाई रू. ७० हजारमा बेच्ने गरेका छौ । अघिल्लो वर्षहामीले झण्डै रू. ७२ लाखको स्टेशनरीका सामान विक्री गर्यौँ । चालू आर्थिक वर्षमा रू. १ करोड भन्दामाथि विक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।
नेफस्कुनले सञ्चालन गरेको केन्द्रीय वित्त प्रणालीको स्थितिचाहिँ कस्तो छ ?
नेफस्कुनका सबै सदस्य संस्थाहरूलाई केन्द्रीय वित्त प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने नियम बनाएका छौं । अहिले रू. ११ करोडभन्दा बढी रकम पूँजीका रूपमा सङ्कलन भएको छ । त्यसमा आफ्नै सदस्य संस्थामार्फत रू. ९ करोड लगानी भएको छ । यसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ । भविष्यमा नेफस्कुनले यो रकमबाट आयआर्जनको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।